Troy Deeney Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta Leh
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Troy Deeney Childhood Story Plus Xogta Warka Xogta Leh
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran oo ah qofka ugu caansan magaca 'Nickname'; "Dee". Troy Deeney Childhood Story Sheeko iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la arki karo wakhtiga caruurnimadiisa ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu goolal dhalin karo goolal laakiin ugu yaraan tixgelinayaan Troy Deeney's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Hore
Troy Matthew Deeney wuxuu ku dhashay maalinta 29th December December 1988 ee West Midlands, Birmingham, England. Wuxuu ku dhashay hooyadiis, Emma Deeney iyo aabe, Paul Anthony Burke. Troy wuxuu ku koray Chelmsley Wood. Waxa uu ahaa mid ka mid ah saddex carruur ah oo u dhashay waalidkiis, oo kala qaybiyay markuu ahaa 11 sano jir. Qaybtoodu waxay calaamad u tahay bilowgii barbaarin xun sida lagu sharaxay noloshiisa hore.
Waa arrin ku xiran tahay in xitaa da'da 14, kubadda cagta kuma bilaabin Troy. Kadib markii waalidkiis ay kala qaybsameen, himiladiisa waxay ahayd inuu dhammeeyo waxbarashadiisa. Ugu horreyn wuxuu ahaa, Troy oo dugsiga laga eryey markii uu ahaa 14, ka hor inta uusan ku laaban da'da 15. Hadafkiisa waxbarasho ee la dhammaystiray ma dhicin. Wuxuu dugsiga ka tagay 16 iyada oo aan wax GCSE ah oo bilaabin tababarka sidii lebbaal, oo uu ku kasbaday £ 120 asbuucii.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Kacsanaanta Fikradda
Ka dib markii uu arkay waxbarashada ma ahayn wicitaankiisa, Troy wuxuu go'aansaday inuu kubadda cagta u qaato sidii ugu danbeysay. Kadib samaynta codsiyo badan, waxaa lagu casumay Aston Villa akadeemiyada in ay ka qayb qaataan tijaabada afar-cisho ee xilliga xagaaga iyadoo la eegayo helitaanka qandaraaska dhalinyarada. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu seegay saddexda maalmood ee hore. Taas ayaa keentay in kooxda ay ka niyad-jabto madaama aysan ku helin qandaraas qandaraas.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo uu niyadjab ka muujiyay Villa, koox yar oo Chelmsley Town ah oo uu hore u dalbaday inuu aqbalo. Intii uu joogay Chelmsley, waxaa daawaday taliyaha Walsall ee Mick Halsall, oo kaliya ka qeyb galay ciyaarta Deeney wuxuu ciyaarayay sababtoo ah wiilkiisa ayaa sidoo kale ciyaaraya, sababtoo ah ciyaarta ayaa la qorsheeyay inuu dib u dhigo.
Deeney wuxuu ciyaaray inta uu sakhraansanaa, laakiin wuxuu dhaliyay toddob gool isagoo ku guuleystay 11-4. Weeraryahanka sakhraanka ah ayaa si degdeg ah loogu soo bandhigay Walsall, laakiin kaliya ayaa ka soo qeyb galay ka dib markii uu macalinka Chelmsley uu sariirta isaga baxay oo uu bixiyay taksi.
Hirgelinta Chris Hutchings maadaama uu tababare ku dheelay Deeney isagoo raadinaya gooldhalinta. Sida nin rabo inuu rabo in uu ku guuleysto, Deeney on 4th ee August 2010, ayaa lagu wareejiyay codsi wareejin qoraal ah iyada oo ay xiiseyneyso kooxo badan oo horyaal ah. Waxay ahayd Watford oo nasiib ku lahaa saxiixiisa. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xabsiga Xabsiga
On 25 June June 2012, Deeney ayaa lagu xukumay toban bilood oo xadhig ah si loogu hanto qof madaxa ah intii lagu jiray dagaal. Waxaa la sii daayey ka dib markii uu u adeegayay ku dhawaad ​​saddex bilood oo xukun ah, ka dib markii uu muujiyay murugadiisa, iyo xaqiiqda ah inuu ahaa markii ugu horreysay ee dembiile. Tan iyo markii xabsiga laga sii daayay 2012, wuxuu ku guulaystay GCSE Ingiriis, Sayniska iyo Xisaabta.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xiriirka iyo Nolosha Qoyska
Deeney wuxuu guursaday xaaskiisa quruxda badan, Stacey Deeney. Wuxuu leeyahay wiil, Myles, iyo gabadh Ameliya.
Troy Deeney wuxuu ku jiray khiyaamo yar oo khiyaano leh oo ka dhan ah Arsenal tan iyo markii lagu dhawaaqay in wiilkiisa uu ahaa taageere Arsenal. Wiilka yar ee sawirka hooyadiis hoosta ku yaal ayaa wax sabab ah u leh inuu joojiyo muuqaalkiisa gaarka ah ee Arsenal.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Naftaada Shaqsiga
Troy Deeney wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa.
Awoodda Troy Deeney: Wuu masuul ka yahay weligiis. Taas oo kale, isagu waa anshax marin, is-xakamayn, iyo hadda hogaamiye.
Tabaraha Troy Deeney: Mararka qaar, wuxuu u dhaqmaa sida uu u yaqaan--dhan-dhan. Wuxuu noqon karaa mid aan la iloobi karin, mar walbana wuxuu filanayaa inuu ugu xun yahay.
Maxay Troy Deeney jecelyihiin ama neceb yihiin: Wuxuu jecel yahay qoyskiisa, dhaqankiisa. Troy waa qof waxkale oo aan jeclayn wax kasta oo ka mid ah.
Soo koobid, Troy Deeney waa qof dabiici ah. Wuxuu haystaa xoriyad madaxbanaan oo u suurtagelisa in uu horumar ka samaysto labadaba noloshiisa gaarka ah iyo shaqadaba. Tan iyo markii xabsiga lagu sii daayay, Troy hadda wuxuu noqday hogaamiye is-xakameyn ah. Wuxuu awood u leeyahay inuu hogaamiyo qaabka, sidaas darteedna qorshe adag oo xaqiiqo ah noloshiisa iyo tan qoyskiisa.
Troy Deeney Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Qoyska
Waalidiinta Troy Deeney ayaa ka niyad-jabay maadaama ay ku wada noolaan karin waqti uu ugu baahnaa. Fikrad ahaan, wuxuu ka yimid asal qowmiyadeed oo qoys.
Gabar: Troy walaalkiis, Ellis, waa ciyaaryahan yar oo xirfad yaqaan ah oo ciyaara kubada dhexe. Ellis ayaa xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay Aston Villa, halkaas oo uu ahaa kabtanka kooxda akadeemigeeda ka hor inta aan la sii deyn.
Maanta, Ellis waa tababare shakhsi ah, Deeney wuxuu gacan ka geystay inuu maalgaliyo tababarkiisa xirfadda.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta Troy Deeney Childhood Story plus iyo xaqiiqooyinka taariikheed ee aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Japhet Tanganga Taariikhda Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Curtis Jones Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Tariq Lamptey Taariikhda Carruurnimada Iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Phil Foden Taariikhda Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada ee loo yaqaan 'Tyrone Mings'
Harry Maguire Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Trent Alexander-Arnold Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Rob Holding Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Ryan Bertrand Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Jermain Defoe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
James Maddison Sheeko Waaweyn Xogta Warka Xaddidan